Chii Chakaipa neChina? | Martech Zone
China, April 7, 2011 Chishanu, April 8, 2011 Douglas Karr
Ini handifanire kungosarudza paMakona mana mana… Ndine nyaya imwechete nevazhinji venhau venhau mafomu. Dambudziko rakafanana mune angangoita ese mapuratifomu eruzhinji. Na Foursquare, dambudziko riri pachena zvakanyanya, zvakadaro. Mabhizinesi anoda kutora mukana wepuratifomu - asi hapana nzira yekuzviita.
Nekuda kweizvozvo, unowana hupombwe seizvi… imwe kambani isiri padhuze neni uye yandisina hukama nayo, ichindibvunza kuti ndive shamwari yavo.
Kune nguva dzose mukana wekuti spammer, asi ini handina chokwadi. Izvi zvinogona, zvirokwazvo, kuve bhizinesi rakandinangisa uye rinoshuvira kuti vanga vaine hukama navo. Dambudziko chairo, chokwadika, nderekuti hapana nzira dzekuti vanyatsoita izvozvo kuburikidza neFairquare - saka vanofanirwa kushandisa nzira iyi.
Hukama huripo pakati pevemabhizimusi nevatengi hunofanirwa kumira kuve hwekufunga kumashure mukugadzirwa kwemapuratifomu enhau enhau. Zvinotaridza kuti ndiyo chete nguva mabhizinesi anopiwa mukana mune aya mabhizinesi ndipo panenge paine kudikanwa kwekugadzira mari. Nekudaro iyo Foursquare yakakosha.
Kana ndiri bhizinesi, ndinogona kutumira yakakosha paFreesquare yevatengi kuti vatore mukana we ... kana vangopinda. Pane nhema imwe nyaya ine Foursquare. Mazhinji mabhizinesi haadi kunyengedza vatengi pashure vakatouya nepamusuwo wepamberi - dambudziko riri kuvatora to gonhi repamberi.
Makona mana arikushaya mukana wakakura pano. Vatengi kuda kubatana nemabhizinesi - izvo zvakasiyana pane kukumbirwa nekushambadzirwa kune nemabhizinesi Ads haashande… hukama hunoita. Ko kana Foursquare, pachinzvimbo, ikakupa yakanaka yakachena interface kuti uwane nzvimbo dzakakukomberedza idzo shamwari dzako dzinowanzo shanya - pamwe nechikamu chesegmentation kuti iwe ugone kupatsanura mhando yebhizinesi.
Uye ko kana Foursquare ikapa mabhizimusi mukana wekutsikisa zvinopihwa kunetiweki yeshamwari uye vagojoinawo paunopinda? Zvino icho chingave chishandiso icho vese mabhizinesi nevatengi vangakoshe!
Zvichida chimwe chikonzero ini chandinofanira kufunga uye nekukudziridza iyi foni app ndanga ndichigunun'una ndichitenderera mune grey nyaya kwechinguva.